August 2019 - Uptodate MM
Uptodate MM | August 11, 2019
ဒီနေ့မနက်အစော LEKIMA ပြင်းအားကြီး တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာဖုကျန့်ပြည်နယ် ဝန်းလင်မြို့ကိုဗဟိုပြုကာ ပြည်နယ် ကမ်းခြေ တလျောက်ကို ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ မုန်တိုင်းဟာ ပြည်နယ် ရှစ်ခု ကို ရိုက်ခတ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ် ဖုကျန့် ရှန်ဟဲ လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေ ဖျက်သိမ်းထားရပါတယ်။ ဒီနေ့ ရှန်ဟဲမြို့ရှိ လေဆိပ်ကြီး နှစ်ခုရဲ့ လေယာဉ် ခရီးစဉ် (၅၂ဝ) ဖျက်သိမ်းထားရပါတယကျည်ဆန်ရထား အမြန်ရထား အဝေးပြေး
သစ်တောတွေခုတ်၊ ကျောက်တောင်တွေ ဖြိုတဲ့သူတွေကို ကျိန်စာတိုက်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို မွန်ပြည်နယ် ဘေးကင်းပါစေဆို ဆုတောင်းလို့ မမှီတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။ တွန်းလှန်နိုင်ပါစေ၊ တောင့်ခံနိုင်ပါစေ၊ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင် ပါစေ လို့သာ ဆန္ဒပြုမိတော့တယ်။ နှစ်စဉ် ရေကြီးတယ်။ နှစ်စဉ် မြန်မာတစ်ပြည်လုံး တစ်နေရာပြီး တစ်နေရာ ဒုက္ခပင်လယ် ဝေရတယ်။ ဒီလိုကြုံရတဲ့နေရာတွေကို ကြည့်လိုက်။ တောခုတ်တာ၊ တောင်ဖြိုတာတွေရဲ့
Uptodate MM | August 7, 2019
ပရိသတ်ကြီးရေ သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှာဖွင့်တဲ့ အောင်ဘာလေသိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကတော့ ဟသာင်္တမြို့ကနေ့ ဆွတ်ခူးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အများမြှော်လင့်နေတဲ့ အကြီးဆုံးထီဆုကြီးကတော့ ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးခင်မှာပဲ ဟသာင်္မြို့ကပေါ်ထွက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Facebook သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်တဲ့ အောင်ဘာလေထီဖွင့်ပွဲရဲ့ အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ သိန်းတစ်သောင်းခွဲကို ဟင်္သာတမြို့ရဲ့ စွယ်တော်ထီဆိုင်က ရရှိသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံထူးရှင်ဟာ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်မပေးခဲ့ဘဲ ထီထိုးသွားတဲ့အတွက် မည်သူမည်ဝါ
အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်သတင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်) (က) အားကောင်းသော မုန်တိုင်းငယ်အခြေအနေ ၁။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များ အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းငယ် (Depression)သည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျား ခဲ့ပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ် (Deep Depression) အဖြစ်သို့
Uptodate MM | August 6, 2019
ဒေသ ၁၂ ခု မုန်တိုင်းငယ်အရှိန်ကြောင့်မိုးကြီးနိုင်မည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ရှိ မုန်တိုင်းငယ်သည် ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးကြီးမည့် အခြေအနေကြောင့် မြေပြိုမှုဘေးနှင့် ရေကြီးရေလျှံမှု သတိပြု နေထိုင်ရန် မိုးလေဝသနှင့် ဇလ ဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက သတိပေးသည်။ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းမှတစ်ဆင့် သြဂုတ် ၆ ရက်တွင် မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်လာပြီး ဆက်လက်အားကောင်းနိုင်သည်ဟု
သြဂုတ် ၇ ။ ။ မိုဘိုင်းလ်အင်တာနက်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေး နက်ဝပ်ခ်များအတွက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ကောင်းမွန်လာမည်ဟု ပြောဆိုထားသည့် Intelsat 39 ကို မြန်မာစံတော်ချိန် ဩဂုတ် ၇ ရက်၊ နံနက် နှစ်နာရီတွင် လွှတ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဂြိုဟ်တုကို လွှတ်တင်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆက်သွယ်ရေး
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေ များစွာဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ရွှေမှုံရတီက လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီး တစ်ဦးဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက အသက်(၂၀) အရွယ်မှာ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရွှေထူးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက အခုလက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကိုလဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းအောင် နေထိုင်နေလျက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့
ထမင်းကြော်တစ်ပွဲကို ၇၀၀၀ တောင်းတဲ့ မကွေးကားကွင်းနားက ရိုက်စားဆိုင်……ဝင်စားလို့ ရတယ်ပြောတဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို ဝင်စားကြည့်လိုက်တော့….(မကွေးကိုလာမယ့်သူများ သတိထားပါ) မ​ကွေးကိုလာမဲ့ မိတ်​​ဆွေးများသတိထားကြပါ။ မ​ကွေးကားကွင်း အ​ဝေရာလမ်းဘက်​ကို ထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​ ​ကောင်းမွန်​​ဆေးရုံဘက်​ကိုထွက်​တဲ့အ​ပေါက်​​ပေါ့ ​ …… ထမင်းကြော်တစ်ပွဲကို ၇၀၀၀ တောင်းတဲ့ မကွေးကားကွင်းနားက ရိုက်စားဆိုင်……ဝင်စားလို့ ရတယ်ပြောတဲ့ ထမင်းဆိုင်ကို ဝင်စားကြည့်လိုက်တော့….(မကွေးကိုလာမယ့်သူများ သတိထားပါ) မ​ကွေးကိုလာမဲ့ မိတ်​​ဆွေးများသတိထားကြပါ။
၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်၊ လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ မိုးသည်းထန်ခြင်းတို့ ဖြစ်မည် မိုိးဇလ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၆)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (Low Pressure Area)သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ နောက် (၄၈)နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်
Uptodate MM | August 5, 2019
နိူင်ငံပေါင်း(၂၀) ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ အမြင့်မားဆုံးရွှေတံဆိပ်နှစ်ခုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာနိူင်ငံမှ သားတို့အမွှာညီအစ်ကို… ကမ္ဘာမှာမြန်မာ့အနုသုခုမယဉ်ကျေးမှုကိုချပြပြီးအမြင့်ဆုံးရွှေတံဆိပ်(၂ )ဆုကိုရယူခဲ့တဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တော်ကြသော မျိုးဆက်သစ် ညီငယ်များ Russiaနိုင်​ငံ Vladivostok မြို့ Okeah Center မှာကျင်းပတဲ့ Children of the World 2019 နိုင်​ငံ​ပေါင်း(၂၀ )၀င်​​ရောက်​ယှဉ်​ပြိုင်​ရာမှာအမြင့်​မားဆုံး​ရွှေတံဆိပ်​နှစ်​ဆုကိုမြန်​မာနိုင်​ငံမှ ဆွတ်​ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်​ရှင်….crd-myatnuthway Russia နိုင်ငံ, Vladivostok မြို့ရှိ